Soomaalida Britain oo qaati ka taagan Sirdoonka MI5
Home Diaspora Soomaalida Britain oo qaati ka taagan Sirdoonka MI5
Ilaa iyo 40,000 oo Soomaali ah islamarkaasna wata Jinsiyada wadanka Britain ayaa lasheegay ineey si weyn uga caroodeen Sirdoonka wadankaas oo ku cadaadinaya ineey basaas ugu noqdaan muwaadiniin Soomaaliyeed oo lala xiriirinayo Al-shabaab.
Telefeshinka Press TV ee laga leeyahay wadanka Iran kuna hadla luqada Englishka, ayaa baahiyay in hogaamiyaal Soomaali ah oo kunool magaalada London kulan ay la qaateen Saraakiisha Sirdoonka Ingiriiska ee loo yaqaan MI5, kulankaan ayaa ujeedkiisu ahaa sidii ay wada shaqayn udhex mari lahayd Soomaalida iyo Sirdoonka dalkaas.
Markii ugu horeesay ee ay soo baxday taatikada Ingiriisku uu ku doonayo in Soomaalida wadankaas ay basaas u noqdaan, ayaa waxay soo baxday Sanadkii 2009, xiligaas warbixin soo baxday ayaa lagu sheegay in sirdoonka MI5 ay handadeen 5 qof oo muslimiin ah, oo kunool bariga qaarada Afrika, kuwaasoo ay ugu goodiyeen hadii ay lashaqayn waayaan ineey xayiri doonaan dhamaan Safarada ay galaan.
Sadex kamid ah ragas ayaa diiday ineey lashaqeeyaan sirdoonka Britain, waxaana kamid ahaaMahdi Xaashi oo Jinsiyada dalkaas looga qaaday qaraar kasoo baxay wasaarada arimaha dibada dalka Britain, waxaana markiiba soo baxay war sheegaya in Mahdi uu ku xiranyahay wadanka Jabuuti kaasoo ay gacanta ku dhigeen Ciidamada gaarka sirdoonka Mareeykanka.
Doowlada Britain ayaa waxay horay uga digtay qataro kasoo waajaha dhalinyaro Soomaaliyeed oo tababar kusoo qaata gudaha Soomaaliya islamarkaasna dib ugu laabta Britain, waxaana Ingiriisku uu sheegay inuu kabaqayo in arimo ku saabsan Argagaixisnimo ay dhalinyaradaas kafuliyaan.